Saxiixiyaasha Road Mape-ka Oo Salaanta Isla Dhaafaya | Gedoonline
Saxiixiyaasha Road Mape-ka Oo Salaanta Isla Dhaafaya	Added by Editor on August 27, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho(GMN)-Waqtiga Saxiixiyaasha oo gaabsi ah iyo Masuuliyiintaasi oo soo dhexgalay Madmadow iyo khilaaf salka ku haya Xildhibaanadda cusub ayaa sababay in qaarkood aysan salaanta iska qaadin.
Madaxwaynaha iyo Ra’isulwasaaraha oo lababduba waqtigoodii uu dhamaaday isla markaana ku jira Saxiixiyaasha Road-Mape-ka ayaa si aad ah isku khilaafsan Xildhibaanadda Muranka dha;liyey ee Maxkmadda Go’aanka ka gaaraysa.
Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa soo jeediyey in Maxamadda sare ay go’aan ka gaaro Xildhibaanadda lagu murasann yahay halka Gaas isna uu qabo in go’aanka loo daayo Guddiga Farsamdda.
Madaxwaynaha xilkiisa lagu haysto ee Caalim ayaa dhankiisa sheegay in Madaxwaynaha usan la qabin fikirkiisa isla markaana uu ka hor imaanayo qodobadii lagu heshiiye ee Garoowe II.
Waxa Muuqanaya is faham waa aan daah saarnayn oo soo dhexgalay Xubno ka mid ah saxiixiyaasha Road-Mape oo hawshoodu ay ka haran tahay waqti kooban.
Clinton oo Kulan la qaadatay Xubnaha Road-Mape-ka
Saxiixiyaasha ku sugan Nairobi oo kulan ka yeeshay Khilaafkooda
Qodobo ka mid ah Raod-Mape-ka oo Qalinka Lagu duugay
Madaxweynaha oo ka xanaaqay shirka saxiixiyasha